Inona avy ireo tombontsoa azo avy amin'ny fividianana ireo ora fiambenana YouTube?
Manampy anao hahatratra 4,000 ora mba hanokafana ny fantsona anao
Manampy amin'ny fampitomboana ny laharan'ny fikarohana ao amin'ny YouTube sy Google ny ora fiandrasana
Ny serivisy STARTS amin'ny 24-72 Ora & mitohy isan'andro mandra-pahatongan'ny Fahatongavana
Fanaterana haingana sy tsara
Ny tsara indrindra raha mandefa horonantsary 15 + minitra ianao
Fomba haingana hampitomboana ny ora fijerena YouTube
Araka ny tatitry ny Statista, horonantsary maherin'ny 500 ora no ampidirina ao amin'ny YouTube isa-minitra. Miaraka amin'ny votoaty be dia be, mihasarotra ny dingana fanolorana valin'ny fikarohana mifandraika amin'izany. Hatramin'ny taona vitsivitsy lasa, niantehitra tamin'ny isan'ny fijerena horonan-tsary ny YouTube mba hampifanaraka ny valin'ny fikarohana sy ny horonan-tsary atolotra. Niova ny fitsipi-pitsarana an'ny YouTube ary, amin'izao fotoana izao, YouTube dia mandray metrika maro hanafatra ny valin'ny fikarohana.
Ny metrika 'Fotoam-pijerena' dia heverina ho lafin-javatra voalohany amin'ny famaritana ny laharan'ny YouTube. Ny YouTube dia mijery ny habetsahan'ny fotoana lanin'ny olona hijerena ireo horonan-tsary ary raha mifandray amin'ny horonan-tsaryo izy ireo na tsia. Tsy momba ny fijerena fotsiny izany, fa momba ny faharetan'ny olona mijanona amin'ny horonan-tsaryo. Na dia mora aza ny mampitombo ny fomba fijerinao, dia mety ho sarotra ny mampitombo ny ora fiambenanao amin'ny fomba organika. Eto no ahafahan'ny YTpals manampy anao. Ianao dia afaka mividy ora fijerevana YouTube avy amin'ny YTpals mba hampitomboana ny laharan'ny fikarohana ao amin'ny YouTube sy Google.
Torolalana feno momba ny fotoana fijerena
Ny ora fiambenana dia metrika iray izay mamaritra ny halavan'ny votoatinao mitazona ny mpijery. Mba hampitomboana ny fotoana iambenanao dia mila manao ny horonan-tsary ho hitan'ny mpijery kokoa ianao. Alohan'ny handehanantsika amin'ny fomba fampitomboana ny ora fiambenana, andeha hojerentsika fohifohy ny tantaran'ny algorithm amin'ny filaharana YouTube.
Mandra-pahatongan'ny taona 2012, ny fepetra voalohany amin'ny fahombiazan'ny horonan-tsary dia heverina ho ny isan'ny fijerena. Ny laharan'ireo horonan-tsary dia nofaritana tamin'ny isan'ny mpijery voaangona. Izany dia mitarika amin'ny fampitomboana ny fampiasana baits click, miaraka amin'ny lohatenin'ny horonan-tsary sy ny thumbnails izay miahiahy indrindra amin'ny fahazoana kitika. Na dia hahazo fijery marobe aza ireo horonan-tsary click bait ireo, dia ho ambany dia ambany ny tahan'ny fihazonana ny mpihaino. Ny taham-pamokarana avo dia manondro fa tsy afa-po tamin'ny soso-kevitra ny mpampiasa. Vokatr'izany dia tsapa fa ny isan'ny fijerena dia tsy famantarana tsara indrindra amin'ny kalitao na ny maha-zava-dehibe ny horonan-tsary.
Nahatsapa ny YouTube fa ny fepetra tsara kokoa ho an'ny horonan-tsary dia ny habetsahan'ny fotoana lanin'ny mpampiasa amin'ny lahatsary. Rehefa mijery horonan-tsary hatramin'ny farany ny mpijery, dia manondro fahafaham-po ambony kokoa izany. Satria ny ankamaroan'ny fidiram-bolan'ny YouTube dia avy amin'ny dokam-barotra, dia azo inoana fa tiany ny mpijery hijery horonan-tsary mandritra ny fotoana maharitra. Eken'ny mpanao dokam-barotra ny YouTube amin'ny fanisana kalitaony sy ny maha-toerana fijerena horonan-tsary isan'andro ho an'ny mpihaino.
Tamin'ny Oktobra 2012 no natomboka ny algorithm YouTube vaovao. Ity algorithm vaovao ity, mifototra amin'ny 'Watch Time' dia nandinika ireo horonan-tsary izay nitazona ny mpijery. Nanomboka nanitsy ny laharan'ireo horonan-tsary ny YouTube ary nanome valisoa ho an'ireo izay hita fa nahasarika sy nitazona ny mpijery tao amin'ny YouTube nandritra ny fotoana maharitra. Miaraka amin'ny algorithm vaovao, ny isan'ny fijerena dia tsy noheverina ho ny famaritana ny votoaty laharana.
Inona no atao hoe Time Time?
Ny Watch Time dia anisan'ireo metrika maro ampiasain'ny YouTube ho an'ny SEO. Ny YouTube dia mamaritra ny Ora Fijerena ho ny fitambaran'ny fotoana lanin'ny mpijery anao hijerena ilay video. Ny YouTube Creator Playbook dia milaza ihany koa fa ireo horonan-tsary izay mampitombo ny fotoana iambenana ao amin'ny tranokala dia natao tsara mba hiseho ambony kokoa amin'ny valin'ny fikarohana sy ny horonan-tsary natolotra. Tsy misy paikady tokana azo ampiasaina hampitomboana ny lanjan'ny fantsonao sy ny horonan-tsary eo imason'ny mpijery. Mitaky fomba fiasa maromaro izany. Azonao atao mihitsy aza ny mividy ora fijerena YouTube amin'ny YTpals. Alohan'ny hahatongavantsika amin'izany dia misy zavatra sasantsasany momba ny fotoana fijerevana YouTube tokony ho fantatrao.
Voalohany, ny tahan'ny fihazonana ny mpihaino sy ny minitra tombanana hojerena dia antony roa mifandray akaiky. Refesina ao anatin'ny minitra na segondra ny fotoana lanin'ny mpijery amin'ny atiny. Ny tahan'ny fihazonana ny mpihaino dia manondro ny salan'isa fotoana lanin'ny mpijery amin'ny atiny. Ny tahan'ny fihazonana avo dia manondro ny fahafahan'ny lahatsary mitazona ny sain'ny mpampiasa. YouTube dia mandinika ny fomba fandraisan'ny horonan-tsaryo amin'ny Ora Fijeren'ny mpampiasa iray ao amin'ny tranokala.
Faharoa, ny YouTube dia mankasitraka ny Time Watch isaky ny fotoam-pivorian'ny mpampiasa. Ny Time Time dia tsy miankina amin'ny habetsahan'ny horonan-tsarinao jerena fotsiny fa ny fandraisan'anjaran'ny videonao amin'ny fotoana iarahan'ny mpampiasa iray manokana ao amin'ny YouTube. Ny fotoam-pivoriana manokana ho an'ny mpijery dia tena zava-dehibe ho an'ny YouTube, satria ny tanjon'izy ireo dia ny hitazona ny mpijery ho afa-po sy hirotsaka amin'ny tranokala mandritra ny fotoana maharitra.
Tsy hahazo ny valisoa avy amin'ny fotoana fijerena ianao raha toa ka mampivelatra video 30 segondra ho 20 minitra. Ny fanalahidy dia ny fanaovana horonan-tsary mahasarika izay mahatonga ny mpijery hifikitra amin'ny fotoana lava kokoa. YouTube dia mijery votoaty izay mampitombo ny fotoana iambenan'ireo mpampiasa ao amin'ilay tranokala.
Ohatra amin'ny fahatakarana ny ora fijerena YouTube
Mitady zavatra manokana ao amin'ny YouTube ny mpampiasa iray ary mijery ny horonan-tsarinao aloha. Avy eo, mijery andian-dahatsary mifandraika amin'izany ny mpampiasa. Amin'ity tranga ity, ny fotoana fiambenana dia ahitana ny fotoam-pijerena fivoriana lany amin'ireo andian-dahatsary ireo. Hisy fiantraikany ratsy ny fotoana ijerena raha miala amin'ilay horonan-tsary ny mpijery ary mandroso manao fikarohana hafa. Ny ora fiambenana dia hisy fiantraikany tsara raha misy fivoriana fijerena YouTube vaovao noforonin'ny atiny video. Ohatra, ny fitaoman'ny YouTuber efa niorina dia hitarika fotoam-pijerena rehefa mandeha mijery horonan-tsary YouTuber hafa mifandraika amin'izany ny mpampiasa.
Ny maha-zava-dehibe ny Time Watch YouTube
Ankehitriny rehefa fantatsika ny momba ny ora fiambenana, andeha hojerentsika ny maha-zava-dehibe ny fotoana fiambenana ho an'ny mpamorona votoaty -
Votoatiny avo lenta: Rehefa mijanona amin'ny horonan-tsaryo hatramin'ny farany ny mpijery, dia midika izany fa manana kalitao avo lenta ny votoatinao YouTube. Ny YouTube dia hankafy ny horonan-tsaryo amin'ny farany ary hampitombo ny laharan'izy ireo amin'ny alàlan'ny fampiroboroboana azy ireo ho toy ny horonan-tsary soso-kevitra.
Monetization: Mba hahazoana vola amin'ny YouTube amin'ny alalan'ny fiaraha-miasa amin'ny AdSense, dia zava-dehibe ny maha-zava-dehibe ny maridrefin'ny ora fiambenanao. Araka ny politikan'ny YouTube vaovao, mila manana ora fiambenana 4,000 farafahakeliny isan-taona ao amin'ny YouTube ny atiny raha te hahazo tombony amin'ny vola ianao.
Ny fahafaham-pon'ny mpampiasa: Raha mitombo ny fotoana ijerena ny fantsona YouTube anao dia midika izany fa faly amin'ny atiny ny mpijery anao. Midika izany fa afaka misarika mpihaino ianao.
Ahoana no ahafantarana ny ora nijerena ny fantsonao
Alohan'ny hamaritana ny fomba hampitomboana ny fotoana iambenanao dia zava-dehibe ny mijery ny antontan'isa amin'ny fantsonao. Mba hanaovana izany, mila manokatra ny Creator Studio amin'ny YouTube ianao ary sokafy ny tabilao analyse avy amin'ny menio havia. Ao amin'ny pejin'ny analyse, safidio ny safidy fijerena 365 andro farany eo amin'ny faran'ny tabilao. Ho azonao jerena ny totalin'ny minitra lanin'ny olona nijerena ny atiny. Raha toa ka mampiseho 240,000 na 4,000 ora ny tarehimarikao, dia tafita soa aman-tsara ny tokonam-baravarana ianao ary eo amin'ny lalana marina ianao.
Mampiasa Analytics mba hahalalana ny fihazonana ny mpihaino
Antenaina hidina tsy tapaka ny mpihaino anao rehefa mandeha ny fotoana, saingy misy teboka sasany ao amin'ny horonan-tsary izay mety hidina tampoka ny fihazonana ny mpihaino anao. Zava-dehibe ny famakafakana ny mari-pamantarana fihazonana ny mpihaino mba hahafantarana ny antony mahatonga ny fihenan'ny fihazonana ny mpihaino ao amin'ny fantsonao. Azonao atao ny mahita bebe kokoa momba ny fihazonana ny mpihaino amin'ny tabilao analyse eo ambanin'ny fizarana topimaso. Azonao atao ny mahita ny tampon'isa sy ny lohasaha amin'ny tahan'ny fihazonana ny mpihaino, izay azo ampifandraisina amin'ny teboka manokana ao amin'ny horonan-tsary. Misy fomba sasany ahafahanao mampisarika ny sain'ny mpihaino anao ao anatin'ny 15 minitra voalohany amin'ny horonan-tsaryo.
Andeha hojerentsika ny sasany amin’izy ireny.
Tongava haingana amin'ny toerana: Raha manazava lohahevitra saro-takarina na manome fampianarana momba ny zavatra iray ny horonan-tsarinao, dia te-hahazo ny atiny avy hatrany ny mpihaino. Mety ho tapitra ny mpijery ianao raha tsy tonga haingana amin'ny atiny fototra.
Esory Intro Music: Raha lava be ny fampidirana ny horonan-tsaryo, dia mety handao ny fantsonao ny mpijery. Ho fanampin'izany, ny mpamorona votoaty sasany dia mandany fotoana betsaka amin'ny fangatahana ny mpijery mba "hanindry ny kisary lakolosy". Tsara raha atao fohy ny intro ary manome topimaso kely momba ny zavatra horesahin'ny videonao.
Aza mampiasa baits Click: Zava-dehibe ny fampiasana lohateny video sy thumbnail marina izay tsy mamitaka ny mpijery. Raha manao votoaty clickbait ianao dia ho sosotra ny mpijery ary mety tsy hiverina amin'ny fantsonao intsony. Ny fomba hafa ahafahanao manaitra ny fahalianan'ny mpijery anao dia amin'ny alalan'ny fampisehoana teaser amin'ny fara tampon'ny fitantarana lahatsary.
Ahoana ny fampitomboana ny ora fiambenana ho an'ny fantsona YouTube anao
Raha mandany fotoana betsaka amin'ny horonan-tsaryo ny mpijery, ny algorithm YouTube dia hanasongadina ny fantsonao sy ny horonan-tsary ao amin'ny tolo-kevitry ny fikarohana. Nanazava ihany koa ny YouTube tamin'ny lasa fa hifantoka amin'ireo horonan-tsary mampitombo ny fotoam-pivorian'ny mpijery ao amin'ny YouTube. Tsy ny horonan-tsary manaraka nojeren'ilay olona taorian'ny nijerena ny horonan-tsarinao ihany no dinihina, fa ny fotoana nijerena ireo horonan-tsary nifandimby taorian'izay. Tsy misy paikady tokana azo ampiasaina hampitomboana ny fotoana fiambenana ny fantsonao. Ny iray amin'ireo fomba dia ny fividianana ny ora fijerena YouTube. Azonao atao koa ny mampiasa ireto torohevitra manaraka ireto miaraka amin'ny fividianana ora fiambenana, mba hampitomboana ny fotoana iambenan'ny fantsonao ary koa ny fotoana iambenan'ny mpijery.
1. Ataovy mahery sy mahasarika ny fampidirana ny horonan-tsaryo
Zava-dehibe ny mampifandanja ny mpihaino hatrany am-piandohana. Lazaina matetika fa ny 15 segondra voalohany amin'ny lahatsary dia tena zava-dehibe amin'ny fisarihana ny sain'ny mpihaino. Ny YouTube Playbook dia manasongadina tolo-kevitra sasantsasany amin'ny fanaovana fampidirana herinaratra, izay ahitana -
Frame voalohany mahasarika: Ny sary voalohany amin'ny horonan-tsary dia tokony ho mahasarika, na amin'ny alalan'ny fampiasana ny maha-olona sy ny fandefasana hafatra na amin'ny alalan'ny sary.
Mifandraisa amin'ny mpijery: Tokony hiezaka hiresaka mivantana amin'ny mpijery ianao, ary hiantso azy ireo tsirairay fa tsy ho mpihaino.
Alefaso ny fahalianan'izy ireo: Azonao atao ny manao zavatra na mametraka fanontaniana amin'ny mpijery.
Zahao ny clip: Azonao atao ny manolotra topimaso kely amin'ny horonan-tsary izay latsaky ny 15 segondra. Amin'izany fomba izany no ahafantaran'ny mpihaino ny zavatra andrasana.
Ny mpihaino anao dia mety hifikitra sy hijery ny atiny rehefa mampiasa ireo ampahany manan-danja amin'ny horonan-tsary ianao amin'ny voalohany.
2. Aza mampiasa clickbait
Fanta-daza fa tsy mandeha ny baits click raha te hampitombo ny fotoana ijerena ny horonan-tsaryo ianao. Matetika dia misy vokany mifanohitra amin'izany izany satria mitady votoaty hafa ny mpijery raha tsy manatanteraka ilay fampanantenana ianao. Rehefa manome thumbnail sy lohateny ho an'ny horonan-tsary ianao, dia tokony hiezaka hanome ny mpihaino ny sasany amin'ireo zavatra antenainy amin'ny lahatsary ianao. Mety ho toa mahafinaritra ny fanombohana horonan-tsary miaraka amin'ny logo na intro, fa ny fanalahidy dia ny hahatongavana haingana amin'ny teboka.
3. Mampiasà toko amin'ny video
YouTube dia manana endri-javatra lehibe ahafahanao manao toko. Ny toko dia tsy vitan'ny hoe manapaka horonantsary lava ho ampahany, fa mamela ny mpijery hahita izay ho avy amin'ny horonan-tsary ihany koa. Rehefa te hampiditra ny endri-javatra toko ao amin'ny horonan-tsary ianao dia zava-dehibe ny manapa-kevitra ny fizarana video. Ny fizarana na toko tsirairay dia tokony hanana intro tsara sy fitantarana mahaliana. Tena ilaina tokoa amin'ity tranga ity ny famoronana drafitra manjavozavo momba ny toko mialoha. Dingana fanampiny azonao atao ny manampy ireo toko mifototra amin'ny mari-pamantarana. Amin'izany fomba izany, ny mpijery dia afaka mifamadika amin'ny mari-potoana samy hafa hijerena ampahany amin'ny horonan-tsary lava.
4. Ampidiro ny lamina interrupt
Mila mahasarika ny mpijery ny horonan-tsaryo raha te hampitombo ny fotoana ijerenao ianao. Ny fampiasana lamina manapaka dia mety ho tetika tena ilaina amin'ny fanaovana horonan-tsary izay mitazona ny mpijery. Matetika no leo ny olona rehefa miverimberina ao amin'ny horonan-tsary ny karazana sary sy fitantarana mitovy. Mety hisarika ny sain'ny mpijery ny teknika manakana ny lamina toy ny fanovana ny zoro fakantsary, ny sary eo amin'ny efijery ary ny B-roll. Ny fanelanelanana modely dia teknika manova fihetsika, eritreritra, na toe-javatra iray manokana. Ity teknika ity dia tohanan'ny psikolojia fitondran-tena sy fandaharana neuro-linguistika. Rehefa mampiditra singa amin'ny fijanonan'ny lamina ianao dia mamorona sary sy fitantarana izay miova tsy tapaka ary mitazona ny mpijery.
5. Famakafakana mifaninana sy fikarohana teny fototra
Tsy azo tsinontsinoavina ny sandan'ny teny fanalahidy amin'ny atiny video, ka izany no maha-zava-dehibe ny fikarohana teny fanalahidy manokana amin'ny YouTube rehefa mamoaka ny horonan-tsarinao. Azonao atao ny mikaroka ireo teny fanalahidy amin'ny fampiasana fitaovana teny fanalahidy. Ny hany tokony hataonao dia ny manoratra lohahevitra mifandraika amin'ny atiny ary mamaritra ny fahalianan'ny fikarohana ny mpihaino miankina amin'ny habetsahan'ny teny fototra. Azonao atao ny manao fikarohana teny fanalahidy amin'ny fampiasana ny soso-kevitra autocomplete ao amin'ny YouTube.
Tokony hatao tsindraindray koa ny famakafakana fifaninanana hahitana ny karazana votoaty noforonin'ireo fantsona mpifaninana. Ny famakafakana fifaninanana dia tena ilaina amin'ny fitadiavana momba ny mari-pamantarana video, ny teny fanalahidy ary ny fanehoan-kevitra. Ny fampahalalana azo avy amin'ny famakafakana fifaninanana dia azo ampiasaina hampivelarana ny fahatakarana ny mpihaino kendrena. Manampy amin'ny fitadiavana ny banga amin'ny atiny izay azonao fenoina amin'ny atiny video.
6. Ampiasao ny fitantarana amin'ny horonan-tsaryo
Ny fomba tsara hitazomana ny mpijery ho tafiditra amin'ny horonan-tsaryo dia ny famoronana horonan-tsary miendrika tantara. Ny fampiasana fitantarana dia mety ho hevitra tsara ho an'ny mpijery te-hiala voly rehefa mianatra. Azonao atao ny mieritreritra fomba vaovao sy tsy manam-paharoa hampitana ny votoatinao amin'ny endrika tantara. Izany dia hitazona ny mpijery ho liana ary hijery hatrany ny horonan-tsarinao izy ireo, hampitombo ny fotoana ijerena azy. Rehefa mamorona horonantsary ianao dia tadidio ny mamorona votoaty mampiala voly sy mampianatra anao amin'ny fotoana iray ihany. Zava-dehibe ny mieritreritra ny tantara amin'ny endrika fitantarana sy amin'ny endrika famelabelarana amin'ny fakantsary, na firy na firy ny halavan'ny lahatsary.
7. Miara-miasa amin'ireo mpamorona votoaty hafa
Ny fomba tsara hampitomboana ny fotoana ijerena ao amin'ny YouTube dia ny fiaraha-miasa amin'ireo olona mitovy saina izay mahatakatra ny tanjon'ny marikao. Rehefa miara-miasa amin'ny mpamorona votoaty hafa ianao dia afaka misarika mpijery vaovao ary manitatra ny isan'ny mpihaino anao. Izany indray dia manampy amin'ny fotoana iambenanao, ary manampy amin'ny fampitomboana ny fotoana iambenan'ny mpijery ihany koa rehefa manindry votoaty mitovitovy amin'ny fantsonan'ny mpiara-miasa aminao. Ireo fiaraha-miasa ireo dia tokony horaisina ho fiaraha-miasa fa tsy ho toy ny marketing influencer. Raha ny marketing influencer dia momba ny fahazoana mpihaino vaovao amin'ny serivisy iray, ny fiaraha-miasa dia azo antoka kokoa ary mifototra amin'ny soatoavina iombonana.
8. Lahatsary lava kokoa
Misy fiantraikany amin'ny halavan'ny video koa ny fotoana ijerena video. Raha toa ka afaka mahazo fotoana fijerena be dia be miaraka amin'ny mpijery vitsivitsy ny horonan-tsary lava kokoa, ny horonan-tsary fohy kokoa dia mila mpijery betsaka kokoa mba hahazoana ny fotoana fijerena mitovy. Ny horonan-tsary lava kokoa dia tsara kokoa amin'ny fampitomboana ny fotoana iambenana, na izany aza, ny zava-dehibe dia ny tokony hahasarika ny mpijery. Ireo horonan-tsary lava kokoa ireo dia tokony hoforonina ao an-tsaina ny mpihaino kendrena. Tena ilaina ny manitatra ny sasany amin'ireo atiny video fohy misy anao. Afaka mieritreritra fomba tokana hanitarana ny atiny ianao. Rehefa tonga ny fahombiazan'ny fiovaovana lava kokoa dia azonao atao ny mamafa ny atiny mitovy amin'ny endrika video fohy.
9. Mamorona andian-dahatsary
Fomba iray hafa hampitomboana ny fotoana iambenanao dia ny famoronana andian-dahatsary. Mety ho lehibe kokoa ny fotoana ijerena ny andian-dahatsary. Izany dia satria ny mpijery dia hijery hatrany ireo horonan-tsary mifandraika amin'izany. Ity andian-dahatsoratra ity dia afaka mifantoka amin'ny lohahevitra manokana na fanamby iray. Mety amin'ny endrika tantara mihitsy aza. Raha mahasarika ny andian-dahatsaryo dia hiverina hatrany ny mpijery amin'ny atiny, izay mety hampitombo ny ora fiambenana rehefa mandeha ny fotoana. Rehefa misafidy ny lohahevitry ny andian-dahatsary, dia tsara ny mifidy ireo horonan-tsary manana mpijery be indrindra. Azonao atao ny mampiasa ireo horonan-tsary ireo ho fototry ny famoronana votoaty vaovao.
10. Mampiasà YouTube Analytics hahalalanao ny fijery micro sy macro
Azonao atao ny maka hevitra tsara momba ny fantsonao avy amin'ny fizarana analyse YouTube. Azonao atao koa ny mahazo fampahalalana vaovao momba ny fijery macro sy micro amin'ny fantsonao. YouTube analytics dia ahafahanao mijery ny mpijery amin'ny andro sy ny fotoana. Ankoatra izany, misy ihany koa ny safidy hijerena ny angon-drakitra ao amin'ny horonan-tsary. Mila mampiasa ny fizarana analyse ianao mba hamaritana ny salan'isan'ny fotoana fialan'ny mpampiasa. Izany dia hanampy anao amin'ny fampivelarana ny fahatakarana ny fomba ahafahanao mampitombo ny firotsahan'ny mpihaino amin'ny horonan-tsary ho avy. Ny hany fomba ahafahanao manao votoaty mahaliana kokoa ho an'ny mpijery dia ny fahatakarana ny filan'izy ireo, izany no omen'ny YouTube analytics. Azonao atao ny mampiasa ny fampahalalana mba hampifanaraka ny votoatinao mifanaraka amin'ny filan'ny mpihaino.
11. Famaritana ny fotoana mety handefasana lahatsoratra
Tokony ho hita ny horonan-tsaryo raha te hampitombo ny fotoana ijerena ny fantsonao ianao. Mba hanaovana izany, ny horonan-tsary dia tsy maintsy miseho amin'ny tolo-kevitra fikarohana amin'ny fotoana mety. Araka ny fikarohana an-tserasera, ny fotoana tsara indrindra handefasana votoaty ao amin'ny YouTube dia amin'ny mitataovovonana. Izany dia satria heverina ho amin'ny 8 ora alina ny ora fara tampony. Mba hahazoana antoka fa miseho mandritra ny ora fijerena be indrindra ny horonan-tsarinao, dia tokony hamela fotoana ampy ho azy ireo ianao mba ho indexed. Ity soso-kevitra ity dia miasa tsara mandritra ny andro fiasana, na izany aza, raha te-hampiakatra horonan-tsary amin'ny faran'ny herinandro ianao dia mila paikady hafa. Amin'ny faran'ny herinandro dia tsara kokoa ny mandefa ireo horonan-tsary aloha kokoa satria amin'ny ankapobeny dia ambony ny fifamoivoizana amin'ny Internet amin'ny faran'ny herinandro.
12. Ampiasao ny YouTube Playlists
Mba hampitomboana ny fotoana fiambenana dia tsy voatery hijery ny horonan-tsarinao ny mpijery. Mety hitombo ny fotoana fiambenana raha mijery playlist izay misy lahatsarin'olona hafa koa ny mpampiasa. Ny famoronana playlist dia mety hahasoa anao, satria mitarika ny mety ho mpijery mankany amin'ny traikefa fijerena tsipika kokoa. Izany dia ahafahanao mitaona ny fotoam-pijerena manontolon'ny mpampiasa. Mba hamoronana playlists, ny hany ilainao atao dia ny mandamina ny horonan-tsaryo amin'ny filaharana manan-danja, miaraka amin'ny hetsika, lohahevitra, seho ary andian-tantara mifandraika amin'izany ho iray. Ny lisitry ny Playlist koa dia mampitombo ny mety hisehoan'ny horonan-tsaryo amin'ny valin'ny horonan-tsary natolotra.
Rehefa mampiasa ny endri-tsarimihetsika Playlists dia mety tsara ny manatsara azy ireo mba hahazoana traikefa tsara kokoa. Azonao atao ny mampiasa ny endri-javatra amin'ny fotoana fanombohana sy fiafarana mba hamaritana ny teboka 'miditra' sy 'mivoaka' amin'ny horonan-tsary. Azonao atao ny manapaka ny intros sy outros amin'ny horonan-tsary ao amin'ny playlist anao mba hamoronana traikefa milamina kokoa. Aza hadino koa ny manasongadina ny playlist amin'ny mpilalao tafiditra ary koa ny pejin'ny fantsona YouTube. Azonao atao koa ny mampifandray amin'ny pejin'ny playlist amin'ny alàlan'ny fanamarihana.
13. Mampiasà takelaka sy karatra fiafarana
Misy tetika azonao ampiasaina mba hanohizan'ny olona mijery ny horonan-tsaryo fa tsy manindry haingana loatra. Ny iray amin'ireo fika dia ny fampiasana ny endri-javatra Cards ao amin'ny YouTube, izay ahafahan'ny mpampiasa manampy rohy eo amin'ny efijery video. Ireo rohy video amin'ny endrika karatra dia mifandray amin'ny horonan-tsary, playlist, na fantsona hafa. Rehefa mampiasa ny endri-tsarimihetsika YouTube dia tsara ny mametraka ilay karatra amin'ny toerana misy ny mpihaino matetika. Izany dia ahafahan'ny mpijery mijery horonan-tsary mifandraika fa tsy mamarana ny fotoana fijereny. Ny fampiasana End Slates dia safidy tsara hafa hitarihana ny mpijery amin'ny horonan-tsary hafa mifandraika.
14. Ampidiro Teasers
Matetika dia afaka miala ao anatin'ny segondra vitsy ny mpijery anao, indrindra raha video lava ilay izy. Misy fomba azo antoka fa hijanona ela kokoa ny mpijery anao. Azonao atao ny mieritreritra ny hampiditra teaser amin'ny fanombohan'ny horonan-tsaryo, izay mamintina ny votoatin'ny horonan-tsaryo. Ireo teaser ireo dia hanome ny mpijery hevitra momba ny zavatra azony antenaina amin'ny lahatsary.
Raha ampiasaina araka ny tokony ho izy, ny YouTube dia mety ho sehatra lehibe hampivelarana fifandraisana ara-pihetseham-po amin'ireo mety ho mpijery. Rehefa mampiasa ireo tetika ireo ianao mba hampitomboana ny fotoana fiambenana, dia tsy hahazo mpanjifa sy fijery bebe kokoa fotsiny ianao, fa hisy fiantraikany amin'ny fifandraisan'ny mpijery anao amin'ny marikao ihany koa. Azonao atao koa mividy ora fijerevana YouTube avy amin'ny YTpals ary ampiasao ireto tetika ireto miaraka, mba hampitomboana ny fotoana fiambenanao. Miaraka amin'ny serivisy YTpals' Buy YouTube Watch Oras, dia ho afaka hahatratra 4,000 ora ny fotoana fijerena ao amin'ny YouTube, izay hanome anao fahafahana hamatsy vola ny fantsonao. Ny serivisy dia hanomboka ao anatin'ny 24-72 ora aorian'ny fametrahana ny baiko.
YouTube Watch Hours dia nampiana amin'ny kalesinao.